उमेर ढल्दै जादाँ कतिपटक यौन सम्पर्क राख्नु उचित « Pana Khabar
समय : 1:32 am
कति पटक यौनसम्पर्क राख्ने भन्ने कुराको कुनै नियम छैन ।यो पूर्ण रुपले तपाईंको खुशीमा भरपर्छ । तर, यो विषयमा भएको एक अध्ययनमा केहि निश्कर्ष निकालिएको छ की उमेर अनुसार मानिसले कति पटकसम्म सेक्स गर्नुपर्छ भनेर । किन्जी इन्स्टिच्यूट अफ रिसर्च इन सेक्स, रिप्रोक्डशन एन्ड जेन्डरले गरेको अध्ययन अनुसार वर्षभरिमा कति पटक सेक्स गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर सार्वजनिक गरेको छ । परिणाम निकै रोचक छ । अध्ययनमा १८ देखि २९ वर्षसम्म मानिसले वर्षमा औसत ११२ पटकसम्म यौन सम्पर्क राख्छन् । यस्तै ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका मानिसले वर्षमा औसत ८६ पटक सेक्स गर्ने गरेको पाइयो भने ४० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका मानिसले वर्षमा ६९ पटक सेक्स गरेको पाइयो ।
विवाह पछिको नतिजा
अचम्मको कुरा यो थियो की १३ प्रतिशत नवविवाहिता जोडी यस्ता थिए जसले वर्षभरि मै सेक्स गर्न कम गरि सकेका थिए । त्यस्तै ४५ प्रतिशत दम्पतीले महिनामा कहिलेकाही मात्रै सेक्स गर्ने गरेका थिए ।
फ्रिक्वेन्सी कम हुनुको कारण
विवाहपछि सेक्सको ‘फ्रिक्वेन्सी’ कम हुनुको कारण जिम्मेवारी बढ्नु पनि हो । जस्तै: हेक्टिक वर्क सेड्युल, घरको काम आदि ।एक्सर्ट्सका अनुसार उमेर बढ्नुको साथै मानिसमा रोगले पनि आक्रमण गर्न थाल्छ जसले सेक्सप्रतिको इच्छा कम हुँदै जान्छ ।
के भन्छ अरु तथ्यांकले
३४ प्रतिशत मानिसले सातामा दुईदेखि तीन पटकसम्म सेक्स गरेको स्विकारे । सात प्रतिशतले सातामा चारदेखि पाँच पटकसम्म सेक्स गर्न रुचाउँथे ।
माथि दिइएको तथ्यांकबाट आफ्नो सेक्स लाइफको तुलना गर्नु भन्दा पहिले लामो सास लिनुस् र यो ध्यान राख्नुस की सेक्सको अर्थ मिल्ने साथीसँग राम्रो समय बिताउनु पनि हो । जबसम्म तपाईं र तपाईंको पार्टनर सेक्सबाट सन्तुष्ट बन्छन त्यसले फरक पार्दैन की कति समयसम्म सेक्स गर्नुपर्छ भनेर ।
प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २४,शुक्रबार
डर लाग्दो रुपमा बढ्दै छ ‘भिजन सिन्ड्रोम’को समस्या, टेलिभिजन-कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरुले अनिवार्य पढौ
हर्टअट्याकबाट यसरी बच्न सकिन्छ, सामान्य ध्यान दिने हो भने ८० % रोगहरु नै लाग्दैन: डा.भगवान कोइराला
विख्यात अविष्कारक डा.सन्दुक रुइतबारे न्यूयोर्क टाइम्स लेख्छ ‘विश्वकै दुलर्भ आँखा डाक्टर’
अहिलेसम्म उपचार पत्ता नलागेको एउटा ‘खतरनाक’ रोग जुन वैज्ञानिकहरुको टाउको दुखाइ बन्दैछ
योनी चिलाएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
के तपाइको श्वास गनाउछ ? समाधानका लागि यो १० उपायहरु अपनाउनुस
रविको टिमलाई नै किनेको भन्दै पीडितलाई धम्क्याउदै २ करोड २५ हजार ठग्ने ब्यक्ति यिनै हुन् (भिडियो)
बलात्कार आरोपमा धर्मगुरु पक्राउ, डरले खुलेनन् पीडित
नेपालको बनारस अर्थात् ‘प्रसिद्ध तीर्थस्थल रुरु क्षेत्र’ जीवनमा एकपल्ट दर्शन गर्नै पर्ने ठाउँ , बिशेष भिडियो
आजबाट मौन अवधि शुरु हुदै, यो समयमा के-के गर्न पाइँदैन ? पढ्नुस
काठमाडौंका मेयर शाक्यले भने- अबको एक वर्षभित्र काठमाडौंमा विकासको चमत्कार देखिन्छ
निर्वाचित भएमा मैले पाउने सबै तलब र भत्ता जनतालाई आवश्यक पर्ने कामका लागि खर्च गर्नेछु : बिष्णु कार्की